Bekotromaroholatra Mizara ny Niainany Fahiny Tamin’ny Adin’ny Nosy Maloinina ho Lalam-panasitranana ny Tenany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2017 20:40 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, English, Italiano, বাংলা, Ελληνικά, Nederlands, 日本語, Español
Fahatsiarovana ny vondro-nosy Maloinina ao Ushuaia Arzantina, ao amin'ny faritanin'i Tierra del Fuego (Tanin'ny Afo). Sary tao amin'ny Flickr avy amin'i David Bolt , lisansa CC.
Bekotromaroholatra Arzantiniana niady tamin'ny Fanjakana Britanika ho amin'ny fiandrianan'ny Nosy Maloinina i Miguel Savage, izay nanapa-kevitra ny hiverina tany amin'ny nosy hiatrika ny avelon'ny fahiny sy hanomboka hanasitrana ny fery tamin'ny taona 2000, rehefa nangina nandritra ny 20 taona .
Nahatratra 1000 ny isan'ny maty tamin'ny ady araka ny tarehimarika farany tamin'ny fifandonana izay fantatra tamin'ny anarana hoe Adin'i Atlantika Atsimo tamin'ny taona 1982, ary teo amin'ny zareo Arzantiniana no maro tamin'izany.
Ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe Malvinas, viaje al pasado (Maloinina, dia mankany amin'ny lasa) , nivoaka tamin'ny taona 2011, tantarain'i Savage amin'ny antsipiriany ny zava-nitranga nampalahelo niainany raha vao 19 taona monja izy, ary niteny tamin'ny fomba masiaka sy tsy niahotrahotra momba ny “ady tsy misy fotony” nataon'ny miaramilan'i Arzantina, ny fahavalo telo lehibe : ny hatsiaka, ny Britanika ary ny sefony.
Ahitana tantara iray mampihetsi-po momba ny fihaonana sy ny fifankahazoany tamin'ny bekotromaroholatra Britanika ihany koa ny tantara nosoratany, izay nanampy azy tamin'ny fampivelarana ny fomba fijeriny momba ny ady izay samy nandraisan'izy mirahalahy mianaka anjara.
Tao amin'ity antsafa niarahany tamin'ny Cadena 3 ity, nilaza ny ‘tantaran'ny akanjo ba manga’ tsy mampino izay hitany tao amin'ny toeram-piompiana iray tao amin'ity nosy ity i Miguel, izany hoe nanavotra ny ainy tamin'ny lafiny iray. Nanana fahafahana hamerina izany tamin'ny zanakavavin'ilay tompony antsoina hoe Sharon ihany izy ny farany tamin'ny fitsidihana hafa izay nataony tany Maloinina tamin'ny taona 2006 :
An'ny rainy izay maty noho ny rarin-tsaina taorian'ny ady ilay akanjo ba. niara-nisotrosotro kely taminy aho ary niara-nitomany izahay.
Nanome lahateny izy tao amin'ny TEDx Río de la Plata tamin'ny Janoary 2013:
Heveriko fa misy fomba telo hiatrehana ny toe-javatra feno fangirifiriana: manarona ny zavatra rehetra, manorotoro na mamehy ny ratra, ary manova azy ho zavatra tsara. Izany no mahatonga ahy hitantara ny fiainako amin-kafaliana, mizara ny fianarana sy ny faharetana.
Atolotro amim-pihetseham-po ho fahatsiarovana ireo izay maty tamin'ny taona 1982 izany sy ireo izay namono tena. Arzantiniana sy Anglisy.